လိင်ဂိမ်းများအန္း:အခမဲ့မိုဘိုင်း Xxx ဂိမ်းများ
လိင်ကိုချစ်? ချစ်ညမ်း? ချစ်ခြင်းမေတ္တာဂိမ်း? ကောင်းကောင်းတော့:အဘယ်ကြောင့်မသင်ကအားလုံးကိုပေါင်းစပ်သုံးကုန်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းဦးတည်? ဆိုရင်ဒီမှာယနေ့အချိန်တွင်၊ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းတို့သည်ဤနှစ်မျိုးသောသင်ကျေနပ်အောင်:စွဲခံရဖို့ညစ်ညမ်းအဖြစ်ဂိမ်းများဦးတဦးနဲ့၊ဒုတိယအ၊အအန္းမိုဘိုင်းဖုန်း။ ဆိုရင်တစ်ဦးချင်းစီရှိကြောင်းနှစ်ဦးစလုံး၏ဤအမှုအရာအဘို့အသွား၊ရစေရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြောလိင်ဂိမ်းများအန္းတကယ်သွားခံရဖို့အသစ်ရဲ့နေအိမ်အိမ်ကနေ။, ခေါင်းစဉ်ဖွယ်ရှိစေသည်ရှင်းနေတာက၊ဒါပေမယ့်သင်မည်သည့်သံသယရှိပါက၊ငါ့ကိုပြောပါစေဒီ:ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုသာအတူစစ်မှန်တဲ့စု၏ကြယ်၊ကြက်-တုန်လှုပ်သောစိတ်ရှိသည်လိမ့်မည်သင်ပစ်ခတ်မှုအထူကြိုး၏စေးကပ်ပည္ဆိုင္ရာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ကအလုပ်သင် jizz ကိုသင်လုပ်နိုင်သည့်တိုင်အောင်နောက်တဖန်မကိုင်တွယ်:မွာယူသမျှအတိုင်းပြုရှိသည်ဖို့သင် orgasming မှယခုအထိအဆုံး၏အချိန်! ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဤအောင်မြင်ရန်နိုင်၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ၊ကထုတ်လုပ်နှင့်ထုတ်ဝေအကောင်းဆုံးမင်းမိုဘိုင်းဂိမ်းများသောကမ္ဘာ့အစဉ်အဆက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။, ကျနော်တို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်တဲ့အေၾကာင္းအဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်၊သင်အဘယ်သို့ကျနော်တို့အပေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရတယ်နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်၊ဒါကြောင့်မပါဘဲနောက်ထပ်ကြောင်းသတိပြု–သို့အရကုန်အံ့အဘယ်အရာကိုဒီနေရာဒါမင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနား!
ျမပဲကစားချင်တဂိမ်း၊မှန်သော? ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်ငြီးငွေ့၊နှင့်ကျွန်တော်သိသောမိတ်ဆွေထွက်ရှိမျှော်လင့်အများကြီးတစ်ငရဲထက်ပိုပြီးတစ်ရိုက်ချက်အံ့။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ကျနော်တို့တည်ဆောက်ပြီးပြီကျွန်းစု ၃၉ ဂိမ်းများထွက်ကြိုးစားနိုငျသောမွေ့လျော်–အားလုံး၏ကိုယ်ကိုကိုယ်ဖန်တီး။ မရကြဘူးဒါကြောင့်လိမ်၊သူခိုး:ဤအားကစားပြိုင်ပွဲတွင်သာတည်ရှိဒီမှာလိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်အားလုံးအနှံ့အင်တာနက်ရှာဖွေဖို့သူတို့ကိုအပေါ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊သူတို့ရိုးရိုးမဟုတ်။, ကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်လုံခြုံစိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ကုဒ်နှင့်သောကြောင့်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်လွန်းအများအပြား fakers မှကြွလာသောအခါ၊မိုဘိုင်းလိင်ဂိမ်းများ:ဒီဒိုမိန်း၊သင်လွန်းသတိပြုစေဘယ်တော့မှမနိုင်နှင့်အတူသွားပေးကမ်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ! ယခုတစ်လျှောက်လုံးဤ ၃၉ ဂိမ်း၊သင်သိလာပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့အမွေးအရေအတွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောဂရပ်ဖစ်ပုံစံများ၊ဂိမ်းဘော်၊အကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းအရှည်ပြီးတော့:ဤအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမနှစ်ခုကအတူတူဖြစ်သင့်။ ဒီမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဦးမိတ္တူနှင့်ငါးပိစစ်ဆင်ရေး:ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသည်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတိုင်းအချိန်သင်ဝန်အထအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်သူကဂိမ်းအတွင်းလိင်ဂိမ်းများ။, ကျွန်တော်တို့လည်းကျူးလွန်ဖို့ဆက်လက်ဤလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ ၆ သို့မဟုတ်ဒီတော့ခေါင်းစဉ်လွှတ်ပေးရန်ပေါ်တွင်နှစ်စဉ်အခြေခံ:ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုရန်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖမ်းယူအဖြစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးစီးပွား၊အရသာနှင့်အလိုဆန္ဒများအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။
နေစဉ်တစ်နံပါတ်ရှာစေခြင်းငှါ၊ညမ်းဂိမ္းနေရာများ၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်အမှန်တကယ်ရုန်းကန်သို့မဆိုဖြတ်ပြီးလာပေးကြောင်းသင်မိုဘိုင်းဝင်ရောက်ခွင့်အဖြစ်။ ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့၊အချိန်အများစုမှာသူတို့ဟာတကယ်ရုန်းကန်များကိုတစ်လျောက်ပတ်သောအတွေ့အကြုံကိုလူတွေကိုအပေါ်သူတို့ရဲ့ဖုန်း–ကယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးရူပါ။ အကျိုးအတွက်ဖို့လာမယ့်အစက်အပြောက်အတူလိင်ဂိမ်းများကကျနော်တို့စမှအလွန်အစပိုင်းနှင့်အတူမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်နောက်ထပ်အကြောင်း၊အစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်။, နေစဉ်ကနည်းပညာပိုင်းဖြစ်နိုင်ကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအပေါ်သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အိုင်–အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တက်ဘလက်များနှင့်အခြားသူဘာပဲကို–သာတရားဝင်ထောက်ခံမှုအန္းဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအာရုံစူးစိုက်မှယခုထိထာ။ ယခုသင်အံ့သြစေခြင်းငှါ:အမည်သို့အတိအကျကျနော်တို့ပေးခြင်းလူမိုဘိုင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှု? အဖြေကရိုးရှင်းပြီး–မှတဆင့်ဘြတ္! ဂူလူသိများခဲ့ပြီးဖို့အာရုံခံများ၏အရေထုတ်ကုန်များနှင့်လီေနှစ်တွေ–အထူးသဖြင့်ကြွလာသည့်အခါအရွယ်ရောက်ပြီးသူ။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ကျနော်တို့လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုခဲ့ကြောင်းကောင်းတဲ့နှင့်အနာဂတ်-အထောက်အထား၊အရာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်သွားနှင့်အတူအပြည့်အဝ-အပေါ်-အခြေခံ။, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည် Chrome၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီတပ္ဆင္ျပီး။။ အခြားဘြတ္လုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ၊၊ဒါပေမဲ့အဲဒီအကိုတွေစိုက်နေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပေါ်၊သူတို့အဖုံး ၉၅%ခြုံငုံမိုဘိုင်းစျေးကွက်။ ဒါကြောင့်အတိုချုပ်ထဲမှာ:အန္းဖုန်းသုံးစွဲသူများကိုသာရနိုင်စွမ်းကိုဒီမှာ၊ဒါပေမဲ့သူတို့လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်အတူသဟဇာတသူတို့ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်ပုံမှန်–မရူပါ!
အားကစားပြိုင်ပွဲများကြည့်ရှုရန်ကောင်းသောအထွေထွေစည်းမျဉ်းအဖြစ်၊ဒါပေမဲ့ဒီအထူးသဖြင့်အရေးမှကြွလာသောအခါအအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစား။ ဒါကြောင့်အများအပြားအဟောင်းများကိုစီမံကိန်းများထွက်ရှိအမှန်တကယ်ခံစားခဲ့ရသောကြောင့်သူတို့မလုပ်ခဲ့ရကြောင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်အဘယ်သူသည်သိမွတ္သားျခင္း၏ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ပုံဖော်အတွက်အလုပ်လုပ် ၃D အာကာသနှင့်တော့။ သင်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူရန်ကြွလာသောအခါအမြင်အာရုံအရည်အသွေး၊အနည်းငယ်အရပ်ကိုကိုင်ထားနိုင်ယောင်းရန်အဘယ်လိင်ဂိမ်းများအန္းကမ်းလှမ်း။ ဤအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်တစ်ဝက်ကျော်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဘတ်ဂျက်သို့ဝင်ဂိမ်းဗေ။, သူတို့နေဖို့ပျော်စရာကစား၊ကျွန်တော်ထင်တဲ့အဓိကအရောင်းအချက်ကဒီသက်သက်အလှအပ၏တင်ဆက်ထားရုံဘယ်လိုကောင်းကြည့်အပေါ်မိုဘိုင်းဖုန်းများ။ မြင့်မားအကြံပြုတိုးတက်ေတာက္ပတဲ့အခါဂိမ္း–ဤသင်အားငါပေးမည်အယုံအျညမ်းဂိမ်းကစားသောအမည်ကြိမ်းလုံးမျှော်လင့်ချက်များ(ပြီးတော့အချို့)။ အားလုံးမဟုတ်အနုပညာရှင်များတန်းတူညီမျှဖန်တီး:အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့ငှားရမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြုပါရန်ဆက်လက်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း။
ငါထင်ရုံလောက်အရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းလိုဆွေးနွေးဖို့ဒီနေ့–ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစည်းကိုအဘို့အချိန်ယူဖတ်ရှုဖို့ကျွန်မခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်သောအခါငါငါအကောင်းကြည့်အဘယ်သို့လိင်ဂိမ်းများအန္းပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်မျှော်လင့်အများအပြားအခြားဆိုဒ်များထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ကော်ပီကူးဖို့ငါတို့အတွက်ကြောင့်အချိန်:ပဲသတိရလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သူတွေကိုအမှန်တကယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေးခြင်းအန္းပိုင်ရှင်မှဝင်ရောက်ခွညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံသူတို့အလိုရှိသော။ ထိုအတူ၊သင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ယခုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးအကောင့်ဒါကြောင့်သင်သွားမယ့်ဘာကိုမြင်နိုင်ပါသည်။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားကြည့်ပါဂိမ်းနှင့်မေ့:သင်ဘယ်လိုလဲ၊ပိုကောင်းကြှနျုပျတို့ပြု–ဒါကြောင့်ပေါက်သွားစေဖို့သေချာပါစေကျွန်တော်တို့ကိုသင်ထင်သောအရာကိုသိပါ၏ခြုံငုံအတွေ့အကြုံ!